Nbili nke Teknụzụ Igwefoto Igwefoto - OMG Solutions
Igwe eji uzu igwe eji eme igwefoto
Otu n'ime ihe kachasị mara teknụzụ bụ uto ya na mmalite. Ọ malitere dị ka ihe ọ bụla kama ọ bụ naanị mpempe teknụzụ dị mfe, mana ka oge na-etolite na afọ ọhụrụ na-agbakwụnye njirimara ndị ọzọ ma nwekwuo ohere ma nwekwuo nnwekọrịta igwe N'otu oge, kọmputa na-emeju ime ụlọ ma buru ibu. Ugbu a kọmputa nwere ike pere mpe ọ ga-adaba n'ọbụ aka, a na-ahụkwa maka ese foto. Igwefoto na-emewanye nke ọma na nkọwapụta yana ana-emewanye ya ugboro ugboro, nke a enyerela ndị ọrụ nyocha na onye okike aka inwe ụdị igwefoto ndị ọzọ na-agbagha ọgbaghara nke oge gara aga. Enwere mmụba iji gboo mkpa nchekwa nke ndị mmadụ
A na - enwe nzukọ ụtụtụ taa ebe onye isi na - agwa ndị isi ndị ọzọ okwu, ọ na - abụkarị omume dị nchebe yana ịdekọ akụkọ gbasara mpụ ọ bụla iji nye aka na nyocha na ndagide. Mana oge ụfọdụ na-adịkwa mgbe a na-arịọ ndekọ ndị a n'oge oge nyocha na ihe niile a na-akọ bụ: “Sir ihe mere ọsọ ọsọ nke na enwere oge zuru ezu iji tinye igwefoto” nke a butere ọtụtụ ndị uwe ojii gburugburu. , enweghi ike imeputa ihe ngosi nke ihe omuma vidio na-enweta ihe otutu ihe dikwa obi ojoo. Ndị uwe ojii-ụmụ amaala na-agbakarị ọgụ mgbe niile ma naanị ụzọ ha ga-esi merie bụ ịnwe ihe akaebe na-emeghị ka ekwuru.
Ọnọdụ nke enweghị ike idekọ ihe merenụ ejirila nwayọ ghọrọ ihe ndọghachi azụ na ndị uwe ojii dị elu, ebe ojiji nke ese foto na-eyi ahụ. Ọ dịghị onye uwe ojii ahụ ụta ga-ata ụta, ọ ga-esiri gị ike ịnọ n'ọnọdụ jọgburu onwe ya, ihe mbụ ị na-eche n’obi gị na-edekọ ka ị nwee ike tụọ akaebe mgbe e mesịrị. Ozugbo ndị uwe ojii enweghị ike ịnye ihe akaebe vidiyo dị na iwu ha, ntụkwasị obi ọha na-efunahụ ya, ọ na-esikwa ezigbo ike ikpe ikpe ahụ. Oge ụfọdụ, enwere ike ịnwe ịdọ aka ná ntị mgbe onye ọrụ uwe ojii mere ọrụ n exemomi ma ọ bụ belata ọnọdụ dị oke njọ nke gaara aka njọ. Ndị a bụ ikpe ikpe na-ezighi ezi, onye uwe ojii mere ọrụ ya nke ọma mana enweghị ike inye ihe ngosi vidiyo na-ata ntaramahụhụ. O nweghị onye obi na-atọ ụtọ ntaramahụhụ ọ kachasị mgbe ha mere nke ọma. Ọbụna onye isi ndị uwe ojii nwere ike ịta ahụhụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ọnọdụ ndị dị otú a na-eme n'okpuru ikike ya, ọ nwere ike ibute mbibi ma ọ bụ ajụjụ.
Anyị nọ n’ọgbọ ọhụrụ, enweghị ike iji ọgbọ nke mbụ nke kamera eyi n’arịrị tụnyere kamera ọgbọ ọhụrụ. Anyị na-enwebu ọlị dị mkpa iji aka pịa bọtịnụ ka ịmalite ndekọ, dị ka anyị kọwara na mbụ nke a kpatara nnukwu nsogbu. E nwekwara ndọghachi azụ ahụ metụtara itinye ọdụ ụgbọ mmiri iji wepu ndekọ na igwefoto. Ihe a niile nwere ike iju gi anya ma ghara iru ala. Kemgbe oge gara aga, a hụrụla teknụzụ ndị na-eme iwu ka ọ na-apụta n’ụzọ dị ukwuu, ọgụgụ isi aghọọla ihe a na-ahụkarị. N’oge ohuru, teknụzụ dị nkọ bụ okwu obodo, a na-akpọgharị igwe na mpaghara ọgbara ọhụrụ. Ka ịgbanwuo igwefoto eyi, ihe teknuzu igweaka na-eme nke a. Nke a emeela ka ụzọ ndekọ ederede esite n’usoro bụrụ nke izi ezi na nke enweghị ntụkwasị obi.
Ọhụrụ afọ ọhụrụ maka ndekọ na-akpaghị aka na ntanetị iwu
Ndị uwe ojii akwagala iji oge ọhụụ akpaghị aka na-ese foto na-akpalite iji depụta onwe ha, a nabatara ihe ndekọ akpaka iji chọpụta ihe ndọghachi azụ nke ọgbọ ochie nke chọrọ ịkpata. Site na ịtụkwasị ngwaọrụ ndị a akpaghị aka na ndị ọrụ na-arụ ọrụ, ha nwere ike ịrụ ọrụ ha ugbu a nke ọma. Emebere igwefoto igwe eji arụ sọftụwia iji bido ma kwụsị ihe niile dịka usoro iwu ụlọ ọrụ na-edekọ. Site na ikuku (OTA) mmelite enwere ike izipu ma budata ya site na igwefoto n'ọhịa. Ndekọ nke usoro iwu si otú a ghọọ ihe na-ekwekọghị ekwekọ na usoro iwu ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere ike gbanwee mgbanwe ndị emere n'ụzọ dị mfe site na imelite igwefoto gị.
Wụnye ihe mmetụta nke akpaghị aka mere ka enwe ike ịme mkpebi siri ike, nke na-enyere aka na ndekọ akpaghị aka na-eme ihe omume ahụ na-arụ ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ndekọ a nwere ike ịmalite mgbe agbanyụrụ ọkụ mberede ụgbọ ala na-emeghe ma mepee ụzọ. Nke a bụ teknụzụ igwe anaghị arụ ọrụ nke na arụ ọrụ nke ọma. Senfọdụ ndị ọzọ ihe mmetụta ụgbọala na-akpali ndekọ igwefoto bụ:
Gbaa egbe na egbe egbe
Ụgbọ ngwa ngwa
Ihe ndapụta okuku
Nke a bụ sensọ na - akpalite ndekọ ozugbo. E nwekwara teknụzụ na-arụ ọrụ n'oge ịchụso ụkwụ, na-enwe ọganihu na teknụzụ accelerometer. Igwefoto afọ ọhụrụ nwere ike ikpebi ma onye uwe ojii na-agba ọsọ ma ọ bụ na-aga ije, nke a ga - akpalite ndekọ igwefoto ozugbo. Aleke nke nwere ike itughari onwe ya mgbe otu onye isi dara; Nke a na-arụ ọrụ n'ụzọ amamihe, ma ọ bụrụ na otu onye ọrụ na nsogbu ma chọọ nkwado ndabere. Usoro ahụ na-amalite ndekọ akpaghị aka na-akpọghachi nkeji abụọ nke vidiyo na ọdịyo, a na-eji iji kpoo ma kpọọ ntị nke ndị ọrụ dị nso. Usoro a na-eme karịa ịmị ndị ọrụ nọ nso ebe ọ bụ na ha nwere GPS n'ime ha. A na-ezigakwa ọnọdụ nke onye ọrụ dara n'akụkụ nchekasị nsogbu. Nke a na-enye ohere nzaghachi ọsọ ọsọ na ụzọ ka mma maka ọnọdụ ndị dị otú ahụ.
Akpaaka egwuregwu na-agbanwe
Otu n'ime teknụzụ kachasị dị elu nke nọworo nso bụ oku Kọmputa-enyere aka Dispatch (CAD), nke a na-enye ohere ịnwe amụma na-akpaghị aka karịa. Ọ na-edekọ na akpaghị aka mgbe onye uwe ojii natara oku maka ọrụ. Mpaghara ebe a si emegharị igwefoto ozugbo onye ọrụ rutere ebe enyere ọrụ, ọnọdụ a nwere ike ịgụnye mpaghara nwere onye na-agba ọ .ụ. Enwere ike ibido mpaghara mpaghara ihe ndị CAD ma ọ bụ nwee ike iji aka gị.
Na mmechi, ka idekọ iwu na-aga n’ihu ịbụ ọkọlọtọ, ndị na-eme iwu na-erite uru na nrube isi na iwu ka ewepu njehie mmadụ na echiche ọjọọ. Ndekọ akpaka na-eme ka achọrọ vidiyo dị mkpa karịsịa n'oge dị oke mkpa. Teknụzụ a na - aga n'ihu na - eme ka ntụkwasị obi ọha, nghọta, na ịza ajụjụ na obodo na - arụ ọrụ.
Nzuzo 5520 1 Echiche Taa